पाठक पत्र | Naya Yougbodh National Daily | Page 34 Free songs
Home / पाठक पत्र (page 34)
लैंगिक हिंसाका सवाल बाहिर आउदैनन्
December 4, 2014	0 230 Views
अहिले लैंगिक हिंसासम्बन्धी आधा महिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यो अभियान अभियानका रुपमा मात्रै सीमित देखिन्छ । नारा जुलुस भाषण अन्तक्र्रिया र कोठे गोष्ठीमा गरिने अभियान त्यति सार्थक भएको देखिदैन । वर्ष दिनसम्म महिला हिंसाबिरुद्धका घटना अनगिन्ती हुन्छन् । तर एकाध मात्रै ...
अझै युद्धको ह्याङ
December 3, 2014	0 250 Views
जहिले सत्तामा पार्टी पुग्छ त्यतिबेला पार्टी फुट्ने कुरा नेपालमा नौलो होइन । पार्टी सत्तामा पुगेपछि नेताहरुले पद पाउने पैसा पाउने र शक्तिको आडमा निजी स्वार्थतिर लाग्दा कर्तव्यनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुले अवसर पाउदैनन् । सोझा साझाहरुको शक्तिमा पहु‘च हु‘दैन र असन्तुष्टहरुले पार्टी फोड्छन् यो ...
साक्षरता अभियान नाम मात्रको नहोस्
November 30, 2014	0 209 Views
अक्षरहरु पढ्न सक्ने, हस्ताक्षर गर्न सक्ने अर्थात् ल्याप्चे लगाउन नपर्ने, सामान्य हिसाब गर्न सक्नेलाई सामान्यतया साक्षर हो भनी बुझ्नुपर्छ । निरक्षरता उन्मूलन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप दाङ जिल्लामा यस वर्ष फेरि पनि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिदैछ । विशेष कारणवश विद्यालयस्तरको ...
November 27, 2014	0 218 Views
दाङ फूलबारी गाविस वडा नं. ८ ढुंगेघाट झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि गठित निर्माण उपभोक्ता समिति एकलौटी भएकोमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय, सर्वसहमतीय आधारमा हुनुपर्छ भनी विभिन्न समयमा आवाज उठ्दै आइरहेको थियो । यही सिलसिलामा मिति २०७१।२।२८ गते च.नं. ६२८ को पत्र जिल्ला प्राविधिक ...
६ लेनको काममा ढिलाई नगरौं
November 25, 2014	0 275 Views
अहिले घोराही र तुलसीपुर बजार क्षेत्रका मुख्य सडकलाई ६ लेन बनाउने विषय चर्चामा आएको छ । मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय दाङले ६ लेनका लागि टेण्डर जारी गरी निर्माण कम्पनीहरुस‘ग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेको छ । तर सडक ...
बाख्रा खोरमा हैन, सिंहदरबारमा छिर्नुपर्छ
November 24, 2014	0 195 Views
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले झिनामसिना कुरामा अल्झिएको छ । देशमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा होस् वा विकास योजनामा हुने अर्बौंको भ्रष्टाचार होस्, त्यसतर्फ आयोग पुग्न सकेको छैन । आयोगले गाउ‘–गाउ‘मा गई कुन एनजिओले गाउ‘मा दुईचारवटा बाख्रा वितरणमा भ्रष्टाचार ग¥यो ...
विद्यालय वा अभिभावक को जिम्मेवार ?
November 23, 2014	0 458 Views
विहानको ११ बजिसक्दा पनि विद्यालयको ड्रेस लगाएका विद्यार्थीहरु विद्यालय जाने बाटोमै भेटिन्छन् । सॉझको ६ बजिसकेको हुन्छ विद्यार्थीहरु बाटोमै गुच्छा र खोपी खेलिरहेका हुन्छन् वा कतै चोक चौतारीतिर गफ गरिरहेका भेटिन्छन् । अहिलेका पंक्ति आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीबाट अलग छन् बालबालिकाहरु त्यसको सिको ...
नेपालका मन्दिरमा बलिप्रथाको अन्तर्राष्ट्रिय बिरोध
November 21, 2014	0 236 Views
हिन्दू धर्मले एकातिर अहिंसाका कुरा उठाइरहेको छ भने त्यही धर्म भित्रै विभिन्न बहानामा हिंसा भइरहेको छ । नेपालमा हिन्दू धर्म मान्नेहरुमध्ये थोरै मात्र शाकाहारी छन् भन्ने धेरै मांशाहारी छन् । यिनै मांशाहारीले मन्दिरमा गई पशुबलि दिएर र तीनचार दिनसम्म मासुले पेट भर्छन् । ...
भिकारी शहरिया र मनकारी गाउलेहरु
November 20, 2014	0 212 Views
सिसहनिया गाविसको दुर्गम पहाडी गाउ‘ करंगे जहॉ मोटर बाटो पुगेको छैन । जहॉ उनीहरुको खेतीले तीन महिना खान पुग्दैन र उनीहरु देउखुरीका विभिन्न ठाउ‘मा आएर रोजगार गर्छन् र परिवार पाल्छन् । बिजुली, पानी र बाटो सबैबाट पछाडि परेका करंगेबासीले राज्यको तर्फबाट कुनै ...
माघ ८ मा संविधान बन्ला त ?
November 19, 2014	0 247 Views
माघ ८ मा संविधान निर्माण गरी छाड्ने भनेर भाषण ठोक्दै हिड्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको फुर्ति अहिले घट्दै गएको छ । राजनीतिक सम्बाद समितिले सबै काम नभ्याउ‘दै समितिको म्याद सकिएपछि समितिमा सभापति बिलखबन्दमा परेका छन् । संघीयताको विषयमा अड्किएको हलो अझै अगाडि ...